Network na Intaneti | December 2019
Ịhọrọ ọrụ nlekọta bụ otu n'ime nzọụkwụ kachasị mkpa na nke mbụ nke ịmepụta mkpokọta. Ndị nchịkọta weebụ na-amalitekarị na-echekwa ụgwọ dị ala, n'ihi na ego ha ezughị oke. Ha na-achọ ịhọrọ ụlọ ahịa nke ga-enye ohere kachasị mkpa maka ohere ọ bụla na-enweghị nkwụghachi ụgwọ maka ihe eji eme ihe.
Onye ntanetị Wi-Fi D-Link DIR-620 Na ntuziaka a anyị ga-ekwu banyere otu esi hazie redire ikuku D-Link DIR-620 iji rụọ ọrụ na ụfọdụ n'ime ndị na-ewu ewu na Russia. A na-echere nduzi maka ndị ọrụ nkịtị ndị chọrọ ịtọ netwọk ikuku na ụlọ ka o wee rụọ ọrụ.
Anyị ga-ekweta na ndị na-eme njem NETGEAR adịghị ewu ewu dịka D-Link, mana ajụjụ gbasara ha na-ebili n'oge. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ihe ntanye nke NETGEAR JWNR2000 rawụta na kọmputa na nhazi ya maka ịnweta Ịntanetị. Ya mere, ka anyị malite ... Ijikọ na kọmputa ma banye na ntọala Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya tupu ị hazie ngwaọrụ ahụ, ịkwesịrị ijikọ ya n'ụzọ ziri ezi ma tinye ntọala.
VK netwọk mmekọrịta nwere ike ghara ichebe onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ya site na hacking data nkeonwe. Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme ihe ọjọọ na-achịkwa akụkọ na-enweghị ikike. A na-ezigara ha Spam, ozi ndị ọzọ na-eziga, wdg. Iji jụọ ajụjụ ahụ: "Olee otú ị ga-esi ghọta na ibe gị dị na VC?
Esi gbanwee adreesị MAC na rawụta (cloning, MAC emulator)
Ọtụtụ ndị ọrụ, mgbe ị na-etinye ihe ntanetị n'ụlọ, inye ngwaọrụ niile na netwọk na netwọk mpaghara, na-eche otu okwu ahụ - nchịkọta adreesị MAC. Eziokwu bụ na ụfọdụ ndị na-enye ọrụ, maka mgbakwunye nchebe ọzọ, denye aha MAC nke kaadị netwọk gị mgbe ị banyere nkwekọrịta maka ịnye gị ọrụ.
Ekele ndị niile na-agụ akwụkwọ! Ọ bụrụ na anyị ewere ọnụọgụ nke Onwe anyị maka ihe nchọgharị, ọ bụ naanị pasent 5% (ndị ọzọ) nke ndị ọrụ na-eji Internet Explorer. Maka ndị ọzọ, mgbe ụfọdụ ọ na-emetụ ya aka: dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ, ọ na-ebido n'amaghị ama, mepee ụdị ntanetị niile, ọbụlagodi mgbe ịhọrọla nchọgharị dị iche site na ndabara.
Enwere m ugboro ugboro banyere isiokwu nke ndị nchịkọta akụkọ na ndị na-ese foto n'ịntanetị, na n'ime isiokwu gbasara foto kacha mma online m mere ka mmadụ abụọ n'ime ndị kachasị ewu ewu ha - Pixlr Editor na Sumopaint. Ha abụọ nwere ọtụtụ ihe ntinye ederede nke foto (Otú ọ dị, nke abụọ n'ime ha dị na nkwụnye ụgwọ) na, nke dị mkpa nye ọtụtụ ndị ọrụ, na Russian.
Ndewo! Echere m na ọ bụghị onye ọ bụla ma ọ bụghị mgbe niile na-enwe obi ụtọ na ọsọ nke Ịntanetị. Ee, mgbe faịlụ dọrọ ngwa ngwa, ibu vidiyo na-enweghị ntanetị na igbu oge, peeji nke na-emeghe ngwa ngwa - ọ dịghị ihe ga-echegbu onwe gị. Ma na nsogbu, ihe mbụ ha na-akwado ime bụ ịlele ọsọ nke Intanet.
Ezi ehihie N'akụkọ nke oge a banyere ịmepụta onye ntanetị Wi-Fi, M ga-achọ ịnọ na TP-Link (300M Wireless N Router TL-WR841N / TL-WR841ND). Ajuju otutu ajuajiri n'ahu ndi TP-Link, obu ezie n'ozuzu, nhazi a di iche na otutu ndi ozo di iche iche.
Ozugbo onye ntanetị Wi-Fi na netwọk ikuku na-apụta n'ụlọ (ma ọ bụ ọrụ), ọtụtụ ndị ọrụ na-ezute nsogbu ndị metụtara nkwupụta mgbagwoju anya na ọsọ Ịntanet site na Wi-Fi. Ma, m chere, ga-amasị ọsọ na mma nke Wi-Fi n'ikuku ka kacha. N'isiokwu a, m ga-atụle ọtụtụ ụzọ iji bulie mgbaàmà Wi-Fi ma melite ogo nnyefe data na netwọk ikuku.
Ihe omume kachasị nke ụbọchị ikpeazụ bụ 2014 Olympic na Sochi, otu n'ime egwuregwu kachasị egwu n'etiti ndị na-agba anyị bụ hockey, karịsịa mgbe ụmụ nwoke na-egwuri egwu. Ụnyaahụ - a egwuregwu na USA, na taa, February 16, 2014 na 16:30 - Russia na Slovakia egwu (nke anyị, n'ụzọ, meriri na njedebe ụwa Cup afọ abụọ gara aga).
Ịhazi Asus RT-N12 D1 rawụta maka Beeline + Video
Ruo ogologo oge, edere m otú e si hazie ASUS RT-N12 wireless router maka Beeline, ma ha bụ ndị dị iche iche na ngwaọrụ na ha nyere na iche iche firmware mbipute, ya mere usoro nhazi a dịtụ iche. N'oge ahụ, nhazi nke Wi-Fi rawụta ASUS RT-N12 bụ D1, ngwa ngwa nke ọ na-aba n'ime ụlọ ahịa ahụ bụ 3.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji chebe netwọk ikuku gị, nke a dị mfe iji mee. Enwetala m otú m ga-esi tinye paswọọdụ na Wi-Fi, ọ bụrụ na ịnwe onye ntanetị D-Link, oge a anyị ga-ekwu banyere ndị na-ewu ewu na-ewu ewu - Asus. Akwụkwọ ntuziaka a kwekwara ka ndị na-ahụ Wi-Fi dị otú ahụ dị ka ASUS RT-G32, RT-N10, RT-N12 na ọtụtụ ndị ọzọ.
30 kasị mma search queries Yandex na Google
Ị chetụla banyere ihe ndị mmadụ nwere mmasị na ihe ọmụma ha na-achọ ịchọta na Intanet? Anyị agwakọtara nhọrọ nke ajụjụ nchịkọta funniest na Yandex na Google. Ikekwe ajụjụ ndị a metụtara ọtụtụ. - - - - Ma eleghị anya, ọbụna Yandex agaghị enyere aka n'okwu ndị a. - - Ọ na - eme ma nke a ... - - - - Oh, Cheyabinsk a dị njọ.
Akwụkwọ gị na weebụsaịtị Odnoklassniki nwere oke dị ka ID nke gụnyere nọmba. Ntak emi enye ekeyomde? - Nke mbụ, iji weghachite akwụkwọ gị site na ID, ma ọ bụrụ na ejiri ya ma ọ bụ na ị chefuru paswọọdụ gị. Otú ọ dị, otu esi achọpụta ID gị, ma ọ bụrụ na ị gaghị aga ụmụ klas gị? Anyị ga-ekwu banyere nke a, n'eziokwu, ọ dịghị ihe dị mgbagwoju anya ebe a.
Usoro na ugboro ole ịkwụ ụgwọ, ọrụ dịnụ, usoro nke ọrụ na ngbanwe na ọnụego ọzọ dabere na tarifụ eji. Ịmara nke a dị ezigbo mkpa, ma e wezụga, ụzọ maka ịchọta ọrụ ndị dị ugbu a bụ n'efu, gụnyere maka ndị debanyere aha MTS. Ihe edere Otu esi achọpụta ekwentị na ntanetịị Ịntanetị site na MTS Igbube iwu Video: otu esi chọpụta tarifu nke nọmba MTS Ọ bụrụ na ejiri SIM rụọ ọrụ na modem Enyemaka nkwado akpaka Nnyeaka akaaka Site na akaụntụ onwe gị Site na ngwa ngwa ngwa Nkwado Nlekọta E nwere ụfọdụ okwu mgbe ị pụghị ịchọpụta ọnụahịa Kpebisie ike na ekwentị gị na netwọk ịntanetị site na MTS. Ndị ọrụ SIM kaadị site na MTS nweta ọtụtụ ụzọ iji chọpụta ozi gbasara ọrụ na nhọrọ.
Ị maara na onye ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ebe niile bụ Google Okpu ugbu a na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ọ bụghị naanị ekwentị gam akporo? Ọ bụrụ na ọ bụghị, n'okpuru ebe a bụ nkọwa nke otu ị nwere ike isi melite Google na komputa gị n'ime nanị nkeji. Site na ụzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-esi budata Google dị mma, azịza ya dị mfe - ọ bụrụ na ịchọrọ Google Chrome, ọ dịghị mkpa ka ị budata ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụghị, wepụ ihe nchọgharị a site na saịtị Chrome.
Otu n'ime nsogbu ndị a na-ahụkarị na ndị ọrụ nke ngwaọrụ ndị na-agba ọsọ gam akporo bụ ntinye nke ọkpụkpọ ọkụ, nke ga-ekwe ka igwu flash na saịtị dị iche iche. Ajụjụ nke ebe ibudata na ịwụnye Flash Player ghọrọ ihe dị mkpa mgbe nkwado maka nkà na ụzụ a lara n'iyi na Android - ugbu a, ọ gaghị ekwe omume ịchọta ngwa mgbakwunye Flash maka sistemụ arụmọrụ a na ebe nrụọrụ weebụ Adobe, nakwa na ụlọ ahịa Google Play, ma ụzọ iji wụnye ya ka dị n'ebe ahụ.
Ana m akwado iji ntuziaka ọhụrụ na nke kachasị na-agbanwe agbanwe ngwa ngwa na ịmepụta router Wi-Fi iji rụọ ọrụ na Beeline Go Ọ bụrụ na ị nwere nke D-Njikọ, Asus, Zyxel ma ọ bụ TP-Link, na onye na-eweta Beeline, Rostelecom, Dom.ru ma ọ̄ bụ TTK na ọ dịghị mgbe ị na-esite na Wi-Fi routers, jiri ntụziaka mmekọrịta a maka ịtọlite ​​router Wi-Fi. Lee.